Celebrity Egwuregwu diets. Gịnị ka Pro na-eme egwuregwu Rie?
March 6, 2015 Site Olympic Matt
Mayweather bụ nke isii ụwa-klas na-eme egwuregwu HuffPost na nso nso jụrụ banyere ihe oriri ha àgwà, ma ọ bụghị naanị na okwu nke ọ bụghị mgbe niile n'ịnọgide a ibu ike, ukwuu ná ntị oriri na-edozi atụmatụ. Site a pro bọl ọkpụkpọ ka a nwanyi UFC champ, lelee ndị a na-eme egwuregwu’ Ibọrọ n'okpuru, na mgbe ahụ gbadaa na ịhụ ihe abụọ nutritionists nwere ikwu banyere diets maka arụsi:
Na aga na N'ajụjụ ọnụ, Mayweather gwara HuffPost, “Adịghị m nwere n'ezie a nri n'ihi na m na-eje ije gburugburu na m agha arọ. M nwere ike isi na-eri ihe ọ bụla, ma ọ bụrụ na m na-aghọ aghụghọ, ọ na-eme m na-arụ ọrụ na ihe ka ukwuu ike.”
Age: 36 Best Agha ESPY Award na 2007, 2008, 2010 na 2012; abụọ oge Ọ dịghị. 1 na Forbes na Si Ụwa 100 kasị elu-akwụ ụgwọ na-eme egwuregwu; asatọ ọkpọ ụwa utu aha.
“M nnukwu snacker. M na-agbalị ka ha rie ise, ugboro isii a ụbọchị. Ị adịghị ga-enwe ndị nnukwu, arọ nri mgbe niile. … Ọ bụ ike n'okporo ụzọ na-agbalị na-eri ụzọ ziri ezi.” Age: 26 Abụọ oge NCAA onye mmeri na University nke Florida; atọ n'ozuzu ghota na 2007 NBA Draft; abụọ oge NBA All-Star (2010-2011).
Otu isiokwu na CrossFit Games website gbara ajụjụ ọnụ atọ cross kwesịrị ekwesị egwuregwu na-eme egwuregwu: Annie Thorisdottir, Mikko Salo na Chris Spealler. Thorisdottir kwuru na ọ ṅụrụ a otutu protein emee ka anya doo na-eri a otutu protein Ogwe tupu sọọ mpi.
Ọ na-ahụ kwuru na o rie ọkụkọ n'etiti ihe. On mpi ụbọchị, Salo rie àkwá, mkpụrụ na kọfị maka nri ụtụtụ na mgbe e mesịrị ọkụkọ, àkwá, agwa na ume Ogwe. Spealler kwuru na mgbe asọmpi ọ ga-eri ọkụkọ na-atọ ụtọ poteto ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ nakwa na ọ na-aṅụ “a ụda” mmiri.
Chọrọ tụgharịa ka ndị ụwa si n'elu ndị tenis ọkpụkpọ? Malite site na-aṅụ ibu nke mmiri ọkụ ogologo ụbọchị nile, nakwa dị ka emee ka anya doo mere na agwa protein uche. Zere Mmiri ara ehi na-anọ n'ebe mmanya n'oge tournaments.
Rie nza nke avocados, inweta Cashew butter na nnọọ nta sugar.
Imagide caffeine, ọzọ karịa mgbe ụfọdụ ike jel mmanya tupu ọkụ. Mgbe gị na na ọkachamara egwuregwu na-achọ ume na ike, mkpa ka ị na gị elu mma. Ọ dịghị onye na-enwe mmasị iji nweta ọkara site ihe omume na-enwe wiil ada oyi.
Jide n'aka na-esi asaa ụra awa asatọ a n'abalị, na-atụgharị uche, eme ọtụtụ yoga na tai Chi, na-melatonin Mmeju, nko onwe gị ruo a biofeedback igwe na jikoro gị nchegbu larịị ma, mgbe i nwere free oge ma ọ bụ abụọ, na-a edetu.
Alala tụsaratụ na a cup nke na-ekpo ọkụ licorice tii.
Pro na-eme egwuregwu-gụnyere ọtụtụ, ọtụtụ tenis Player-na-ọma mara ha quirks na mkpali, ma na ubi na anya. Djokovic adịghị fọrọ nke nta ka ọtụtụ n'ime ndị a dị ka Rafael Nadal, onye Djokovic oku “a obi ụtọ nke ụjọ tics na nkwenkwe ụgha na ememe okpukpe.”
Mgbe enzyme-jikọtara immunosorbent nnwale (ELISA) ule gosiri Djokovic nwere ike ekweghị ibe nọrọ ka ọka wit na mmiri ara ehi, o wee na-enweghị gluten maka 14 ụbọchị nke na o chere oké. Mgbe ahụ, dọkịta ahụ jụrụ ya ka o rie a bagel.
“Ọ dị m ka m na-woken elu na a mmanya na-egbu,” ọ na-ede. Djokovic ṅụụrụ anya gluten ihe ọma na bịara adịkwa 11 pound. Ọ na-ekwu ọ na-enwe ngwa ngwa, ọzọ mgbanwe, na-enwe ike itinye uche.
Ebe ọ bụ ya malitere ya ọhụrụ nri, ọ na-ede, “My allergies abated; m ụkwara ume ọkụ okụrede; m na-atụ egwu na obi abụọ na-anọchi obi ike.” Ọ na-agbakwụnye: “M nwere a dị oké njọ oyi ma ọ bụ flu ke fọrọ nke nta afọ atọ.”
“Ihe dị mkpa bụ, ọ bụghị ma na i kweere na ma ọ bụ soro ndị a akpan akpan na-eru nso,” Djokovic ede. “Ihe dị mkpa bụ na ị na-emeghe kpọrọ.”
Mgbe kaktus Njikọ oge na-amalite Wednesday, Fans ịga egwuregwu na Camelback na-azụ anụ ga-enwe ike ịhọrọ ọhụrụ mmejọ ihe dị ka anụ ezi na a mkpisi ma ọ bụ onye na 18-anụ ọhịa iberi nke Pizza.
Ma Dodgers Player rutere ọzụzụ mara ụlọikwuu a na mmiri chọta ụfọdụ decidedly mma mgbanwe nri ụlọ na isi- na obere-otu n'akụkụ nke ọzụzụ mgbagwoju.
"Otu n'ime ihe ndị anyị na-ekwu banyere ha bụ ịghọ healthiest nzukọ ọkachamara egwuregwu,"Kwuru Gabe Kapler, goro ka Dodgers 'ọhụrụ director nke ọkpụkpọ mmepe a oyi, na-ekwughachi a na-anya isi na-egosi na n'elu menu osisi kwa ụbọchị. "Anyị na-ewepụtara na na. Anyị ga-adịghị agwụ agwụ n'ịghọ ahụ. "
Kapler na-emesi ike na ike-ihe oriri ụzọ kemgbe a collaborative mgbalị na a restructured nzukọ dị "omiiko banyere Ngwuputa uru na n'akụkụ peeji,"Ma ọ bụ site nchịkọta ma ọ bụ ndị ọzọ.
O kwuru Brandon McDaniel (ike na oyi nchịkwa), Chris Dunaway (obere-Njikọ ike na oyi nhazi), Nick Francona (osote onyeisi nke ọkpụkpọ mmepe) na Stan Conte (osote onyeisi oche maka ọgwụ ọrụ) dị ka ndị dị ndido na-eme ka ọ eme.
Rute ugbu a, mgbanwe e zutere a ntakiri ego nke free-nso griping. Mgbe Howie Kendrick mere mkpesa na e nweghị sirop na-etinye na ya nri ụtụtụ oriri - na egwu na-amalite smuggling nwanne Jemima si n'ime clubhouse - ọ hụrụ otu kalama organic maple sirop si na-epulite ọrụ ubi Market na-echere ya mkpuchi, site n'ikike nke Kapler.
Scott Van Slyke were metụtara ya aka - aka, enweghị mgbagha ọ bụla, zuru ezu na epe-gwara fingertips. Ọ zụtara a ọkọnọ Cheetos na-ezo ha na ya mkpuchi. N'ihi na Darwin Barney, ya ahia iwu nke oke bụ tomato kechoopu na agba aja aja-sugar oatmeal.
Justin Turner adiaha a mma ndụ a oyi, na-arụ ọrụ si na Dodger Stadium na-esonụ a oriri na-edozi ihe omume na-etinye ọnụ maka ya site McDaniel nwunye, Andrea.
N'agbanyeghị, Turner kwubiri e nwere ihe okwu ahụ bụ nke ga-emetụta - "Ọ bụrụ na ọ na-atọ ezi, ọ bụ ihe ọjọọ n'ihi na ị,"O jiri egwuregwu kwuo. "Ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọjọọ n'ihi na ị, ọ na-atọ ezi ihe. "
Ịchọta ike oriri nwere ike ịbụ nnukwu ihe ịma aka obere-leaguers. Dị ka outfielder Scott Schebler kwuo ya, kasị obere-leaguers 'isi nri isi "na-gbaa, ihe ọ bụla na nke ahụ bụ na-emeghe mgbe 11 elekere - Denny si, Applebees, Ị chọrọ ka m aha ha niile?"
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Sports Guff